Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fiaramanidina » IAG dia misafidy fiaramanidina A330-200 telo hafa ho an'ny LEVEL
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny dia any Arzantina • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Teknolojia fitsangatsanganana • Vaovao any UK • News News
IAG dia misafidy fiaramanidina A330-200 telo hafa ho an'ny LEVEL
Jolay 24, 2017
Taorinan'ny fanombohana vao haingana sy nahomby indrindra tao amin'ny marika International Airlines Group (IAG) an'ny Barcelona, ​​LEVEL, ny vondrona dia nifidy ny A330-200 ho fiaramanidina safidiny hanitatra ny asa.
LEVEL dia nanomboka niasa tamin'ny volana jona 2017 niaraka tamin'ny sidina avy any Barcelona mankany Los Angeles, San Francisco (Oakland), Buenos Aires ary Punta Cana, miaraka amin'ny Airbus A330-200s roa vaovao misy marika manokana miaraka amina toekarena 293 sy seza ekonomika 21 ambony.
Ny A330 dia iray amin'ireo fiaramanidina widebody mahomby sy mahomby indrindra eto an-tany miaraka amin'ny toekarena miasa tsara indrindra ao an-dakilasy ka mahatonga azy io ho marika fampiasa amin'ny maodelim-bola maharitra lavitra mitombo manerantany. Ny A330 no be mpividy indrindra eto an-tany amin'ny sokajy misy azy.
Hatramin'izao, ny A330 Family dia nahasarika baiko efa ho 1,700 miaraka amin'ny fiaramanidina A1,300 Family mihoatra ny 330 amin'izao fotoana izao manidina miaraka amin'ireo mpandraharaha 110 manerantany. Miaraka amin'ny fahamendrehana miasa amin'ny 99.4 isan-jato sy ny fanatsarana ny vokatra isan-karazany, ny A330 Family no fiaramanidina mpiadidy lafo vidy sy mahomby indrindra hatreto.